५० औं वसन्तपछि सिर्जनामा अमर सिर्जनाका धनी ‘अमर वान्तु’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
५० औं वसन्तपछि सिर्जनामा अमर सिर्जनाका धनी ‘अमर वान्तु’
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६, मंगलवार
जीवनको दौडमा यात्रा मैले कता गरें
धेरै वर आइपुग्दा पो भुमरीमा परें
जिन्दगीको वसन्तले ५० औं वर्ष पार गर्दै गर्दा अतितका पानाहरु पल्टाएका थिए गीतकार अमर वान्तु राई । जिन्दगीको स्वर्ण जयन्तीसँगै स्वर्ण अक्षरले लेखिएका शब्द सिर्जनाबाट गीतकार अमर वान्तुले औपचारिक रुपमा सांगीतिक क्षेत्रमा पाइला टेकेका हुन् । ५० वर्षसम्म भोगेका भोगाइलाई गीतबाट समाजमा पस्केका थिए उनले । गीतमा जस्तै उनले गरेका यात्राका क्षणहरु, आरोह अवरोहहरुमा ठोक्किएका गुन्जयमान आवाजहरुले नै गीत सिर्जना गरेको हो । जुन गीतबाट सुरु भएको रेकर्डि…को यात्रा अन्ततः अमर भावना एल्बममा संग्रहित भएर स्रोतासामु आएको थियो ।
२०२३ साल साउन १७ जनैपूर्णिमाको दिन भोजपुरको दिल्पा नागीमा जन्मिएका अमर राई एउटा मध्यम किसान परिवारका व्यक्ति हुन् । वान्तवा राई भएका कारण उनलाई श्रीमतीले वान्तु भनेर बोलाउने गरेकै कारण उनले आफ्नो थरमा अमर वान्तु राई बनाएका हुन् । बुबा लक्ष्मी प्रसाद राई र आमा बृन्दा लक्ष्मी राईका ७ सन्तानमध्येका काइँला छोरा हुन् अमर । ६ वटा छोरा र १ छोरीबीचका काइँला सन्तान अमर वान्तु राई गाउँघरकै भूगोल अनुसार खेती किसानी हुँदै अध्ययन गरेर अहिलेको स्थानसम्म आइपुगेका हुन् । गाउँको चण्डेश्वरी निमाविबाट औपचारिक अध्ययन गरेका उनले अन्नपूर्ण मा.वि.बाट २०४३ सालमा एसएलसी पास गरेका हुन् । आइए सम्मको अध्ययन धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा गरिसकेपछि २०४५ सालमा काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए ।
उनका समाजमा प्राय गरेर धेरै ब्रिटिस लाहुरे भएका छन् । गीतकार अमर वान्तुका सबै दाजुभाइ लाहुरे भए । उनीमात्र फरक सोच राखेर लाहुर गएनन् । उनीभित्र एक ड्रिम थियो । लाहुर जानु भनेको भेडाजस्तो पछि पछि लाग्नु हो, उनले भने– ‘कमसे कम परिवारमा म त फरक बन्न सकुँ ।’ त्यसैले उनी काठमाडौं छिरे । काठमाडौंमा छिर्दा सुरुका दिन निकै विभत्स थियो । उनका जुत्ताका तलुवाहरुले निकै दुःख पाएका थिए । चुलो नबलेको धेरै दिन हुन्थ्यो । पेटमा भोकले संघर्ष गर्दा पनि उनले हार खाएनन् । एक रुपैयाँ गोजीमा नहुँदा चुलो चिसो भएको दिनहरुले उनलाई अझै पनि ताजा स्मरण गराउँछ । कलेज पढ्न काठमाडौं छिरेको विद्यार्थी थिए उनी । तर सपनाको भारी बोकेर मनभरि अठोटका साथ सडक नापिरहेका हुन्थे उनले । गाउँका साथीहरुसँगै उनको बसोबास थियो । सहकार्यमा सम्बन्धहरु अगाडि बढ्दै थिए ।
काठमाडौंमा छिरेपछि बल्लतल्ल शिक्षण पेशामा आबद्ध हुन पाए उनी । ताहचल क्याम्पसमा स्नातकमा भर्ना पनि भए तर निरन्तरता भने दिन सकेनन् । ४–५ वर्षसम्म उनी शिक्षक भएर विद्यार्थीहरुसँग रमाए, चुलो बाल्न सिके र काठमाडौंलाई बुझे । त्यसपछि उनको सोच परिवर्तन हुँदै गयो, कोल्ड स्टोरको व्यवसाय गरे । समयअनुसार उनले साइबरको विजनेश गरे, बुटिक खोले, स्कुल चलाए । एकपछि अर्को व्यवसायमा सफलता पनि हात पार्दै गए त्यसपछि उनले पार्टी प्यालेसको व्यवसाय संचालन गरे । त्यो व्यवसायले पनि समयअनुसार राम्रो सफलता हात पा¥यो । त्यसलाई पनि छाड्दै उनले हाउजिङको व्यवसाय गरे ।
सपना बोकेर काठमाडौं छिरेका उनीभित्र अनुभवको पहाड अग्लिँदै गयो । सफलता पनि चुलिँदै गयो । हेर्दाहेर्दै आफूले आफैंलाई उनले भुलिसकेका रहेछन् । उमेरको वसन्तले स्वर्ण जयन्ती मनाइरहँदा बल्ल थाहा भयो उनलाई । जन्मिएको थातथलो छाडेको वर्षौंपछि उनलाई याद भयो, भोजपुर त साहित्यको उर्बभूमि हो । म किन साहित्यबाट टाढा भएछु ? आफैंलाई उनले प्रश्न गरे । त्यसपछि साहित्य लेखनमा लागे । उनको मुख्य विधा गीति लेखन थियो । समाजभित्र एउटा नमूना बन्ने सोचभित्र भए पनि समयले कहाँ कहाँ पु¥यायो, सोचभन्दा धेरै पर धकेलिएको जिन्दगीलाई स्वर्णजयन्तीसँगै स्वर्ण अक्षरमा परिणत गरे । लेखियो गीत ‘ जीवनको दौडमा यात्रा मैले कता गरें–धेरै वर आइपुग्दा पो भुमरीमा परें’ ।
उनीभित्र समाजको चित्र आँखामा झलझली थियो । २१ औं शताब्दीमा पनि समाजमा विकासकोनाममा दरिद्रता बेचिरहेको जस्तो लाग्थ्यो उनलाई । संसार बदलिँदै गर्दा मुलुकभित्र भएको विभेदले उनलाई छोइरहेको हुन्थ्यो । २१ औं शताब्दीभित्र जातीय छुवाछुत, कमलहरी प्रथा, हलिया प्रथा, छाउपडी ज्यूँका त्यूँ देखिन्थे । त्यसैलाई नै लिएर उनले लेखे ‘परिभाषाका राँटाहरु’ । समाजमा देखिएका असमानताका राँटाहरु नै उनको गीतको पुस्तकभित्र प्रवेश गरेको थियो । त्यस्तै गीतहरु रेकर्ड गर्दै गए, गीतले जीवन्तता पाउँदै गयो र बन्न पुग्यो ‘अमर भावना’ ।
अमर राईले २०४९ सालमा भावना राईसँग विहे गरेका थिए । आफ्नी जीवनसंगीनीसँग जोडेर उनले एल्बमको नाम पनि ‘अमर भावना’ राखेका थिए । एक छोरी र एक छोराका बाबु उनलाई श्रीमती भावनाले वान्तवाबाट ‘वान्तु’ बनाइदिइन् । मायाले वान्तु भन्दा भन्दै उनले आफ्नो नाममा नै ‘अमर वान्तु’ लेख्न थाले । साहित्यसँगै रमाउन थालेका उनी गीति लेखनमा पछिल्लो समय निकै सक्रिय छन् । अमर भावना र परिभाषाका राँटाहरुसँगै उदाएका उनी गीतसंगीतमा छोटो समयमा अब्बल सर्जकका रुपमा दह्रिएका छन् ।
केही समय अगाडि मात्र उनले ‘अमर भावना–२’ को एक गीत ‘तिम्रो शहर’ सार्वजनिक गरे । सँगसँगै तिज पर्वलाई लक्षित गर्दै ‘हरहर महादेव’ तिज गीत सार्वजनिक गरे । दुईवटै गीतमा गायिका सहिमा श्रेष्ठले स्वर दिएकी छन् । समय अनुसार परिवर्तनका भावहरुलाई गीतमा उतार्दै जाँदा उनले समाजलाई प्रतिनिधित्वसमेत गरेका छन् । भूगोल, समाज अनुसार भोगिएका भावनाहरु नै गीतका पाण्डुलिप बन्ने गरेका छन् । धेरै दुःखका आरोह अवरोह पार गरेका उनी अब समाजमा दुःख मात्र होइन दुःखले दिएको शिक्षा अनुसार सुख प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । गीतकार संघ नेपालका आजीवन सदस्यसमेत रहेका गीतकार अमर वान्तुले संघको अक्षयकोषमा १५ लाख रुपैयाँ दिएर गीतकारहरुको हितमा अतुलनीय योगदान दिएका छन् । गत वर्ष मात्र ‘फूलजस्तै’ गीतबाट सातौं म्यूजिक खबर म्यूजिक अवार्डमा उत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड चुमेका उनले गीति लेखनमा नै आफूलाई स्थापित गराउने सोचमा छन् ।
शब्द/चित्रः सुमन पण्डित